Xeraale oo maanta xasiloon ka gadaal dagaalkii cuslaa ee shalay
Wararka naga soo gaaraya degaanka xeraale ee gobalka galgaduud waxay sheegayaan in maanta wax dagaali halkasi ka dhacin,oo qolo waliba ku mashquulsantahay mayd aasid iyo dhaawac gaysaho isbitaal maadaama degaanku dagaalku ka socdo aanay lahayn wax dawoyina iyo isbitaal toona.dagaalkaasoo iskiis u istaagay oo ayan jirin waxxabbad joojin oo laga dhexshaqeeyay,dirirtaasoo udhexaysa beelaha Mareexan iyo Fiqimuxumed(Dir).
Dad badan ayaa ka ka argagaxsan sida caqli xumada ah ee beelahaas wallaalaha isu gumaadayaan,taasoo ay ugu wacantahay qalabaka lagu dagalaamayo oo ah mid aad uculis isla markaana degaanka lagu dagaalamayo ayan lahayn meel lagu gabaadsado.
wararkii ugu dambeyay waxay sheegayaan in dhimashado ay kor usii kacayso,oo dhawac badani intii loo sii waday isbitaalada ay jidka ku geeriyoodeen,walina ma jiran wax dadaala oo laga dhexwado beelahaas isqoonsaday oo ay sabab uahayd aano qabiil,taasoo dadbadani ku tilmaameen inayan waafaqsanayn dhaqanka iyo diintaba in laisku fiirsado walaalo sidilaya.
Waxaa maanta walaac ka muujiyay dagaalkaas lagu hoobtay ee Xeraale Xarunta Dr.Ismaaciil Jumcaale oo ah ah hay,ad udooda xuquuqda aadamaha,waxayna ka codaseem beelaha isdilaya in si shuruud la,aana loo joojiya dagaalkaas aan micnaha ku fadhiyin isla markaana la ilaaliyo nolosha dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan sida dumarka iyo caruurta lagu dul dagaalamayo.
Baaq Xabad Joojin Dagaalka Xeraale
Golaha wadatashida soomaaliyeed ayaa.. Guji
Faahfaahin: Dagaalkii lagu Hoobtay ee Xeraale
Wararka ugu dambeeyey ee dagaalku waxay sheegayaan in ugu yaraan 45 qof ay dhinteen, 75 kalena ku dhaawacmeen kaddib markii.. Guji